ကြက်သားချဉ်စော်ခါးသီးချက် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Tuesday, December 03, 2013 Taunzalat
ချဉ်စော်ခါးသီးစိမ်း...........................၁ လုံး( အခွံခွါ ၊ အူတိုင်၊အစေ့ထုတ်)
ကြက်သွန်နီ......................................၃ လုံး( နုပ်နုပ်စဉ်း)
ခရမ်းချဉ်သီး.....................................၂ လုံး( ၄စိတ်ခွဲ)
ကြက်သားတွေကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီးစစ်ကာ ဆား၊ ပာင်းခတ်မှုန်.၊ နနွင်း
မှုန်.၊ အရောင်တင်မှုန်.၊ ချင်း+ ကြက်သွန်ဖြူရောထောင်းတာတို.နဲ. နယ်
နှပ်ချိန်ပြည့်ပြီဆို ဒယ်အိုးတစ်လုံးမှာ ကြက်သွန်နီကို ရွှေအိုရောင်ရသည်အထိ
ကြက်သားတွေ တစ်ဝက်ကျက်လောက်နှုးအိပြီဆို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလှီးထားတဲ့
အေးမှာ(၁၅) မိနစ်ခန်. ဆက်ပြီးချက်ပေးပါ။